ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံမထိစေဖို့ | သစ်ထူးလွင် (နည်းပညာ)
Home / featured / ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံမထိစေဖို့
ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံမထိစေဖို့
Staff Writer 19:00 featured Edit
ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းအတွင်းက အင်တာနက်ပေါ်က နာမည်ကြီးဝဘ်ဆိုဒ်တွေအတွက် သုံးထားတဲ့ password တွေ တပြုံကြီး အဟက်ခံရတယ်လို့ လုံခြုံရေးသုတေသီတွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့်သာ ဟက်ခံရပြီဆိုရင် ဟက်ကာတွေအနေနဲ့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုပြီး နှောက်ယှက်မှုတွေပြုမှာပါ။
ထင်သာမြင်သာတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ Facebook, Twitter စတဲ့ အသုံးပြုသူ တော်တော်များများဟာ ခန့်မှန်းရလွယ်တဲ့ password တွေကို အသုံးပြုကြတာပါပဲ။ လူကြိုက်အများဆုံး password တွေကတော့ '123456' ဒါမှမဟုတ် '1234567890' စတာတွေပါပဲ။ 'password', 'iloveyou' စတဲ့ password တွေကိုလဲ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့ password တွေပေးပြန်တော့လည်း မေ့သွားပြီး အကောင့်ပျက်တတ်ပါသေးတယ်။
ဒီအကြံပြူချက်ကို ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Neal O' Farrell ကပေးထားတာပါ။ ဟက်ကာတွေ ခန့်မှန်းရခက်စေဖို့နဲ့ မှတ်မိရလည်းလွယ်စေဖို့ အတွက် passphrase လို့ခေါ်တဲ့ စကားဝှက်စာကြောင်းရှည်ကို သုံးပါတဲ့။ သင့်အကြောင်း၊ သင့်ဘဝအကြောင်းကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ ဟက်ကာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းရ၊ သိရခက်ပါလိမ့်မယ်။
Passphrase ကို ဥပမာပြရရင် ခင်ဗျားက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ ဘွဲ့ရတယ်ပဲဆိုပါတော့။ 'I graduated from Yangon University on February 5th 2016." ပေါ့။ ဒါဆိုရင် စာလုံးတိုင်းရဲ့ အစစာလုံးတွေကိုယူလိုက်တဲ့အခါ 'IgfYUoF5th2016' ဆိုတဲ့ password ကိုရလာပါလိမ့်မယ်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတဲ့ အက္ခရာ ၁၄ခုံးပါ password တစ်ခုပါ။ ဒီ့ထက် ပိုခက်စေချင်သေးရင် "I" ကို သင်္ကေတ "!" နဲ့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကုတ်ဖြည်ဖို့ အတော်ခက်တဲ့ password တစ်ခုကို လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ကိုယ့်အကောင့်တွေ အဟက်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ။
နမျ့စနျအခွစေိုကျလတေပျ ရဟတျယာဉျ အသုံးပွုပွီး ထောကျပို့လုပျဆောငျနေ